Gaas oo Maamulka Khaatumo State kala laabtay Aqoonsiga! – Daawo | Anti-Tribalism
← Maxaa ka jira in dowladu ay dooneyso in ay xilka qaadis ku sameyso danjire Maxamed Cali Ameriko?
Daawo+Sawiro:Xafladii maamuka khaatumo ee magaalada Moqdisho →
Gaas oo Maamulka Khaatumo State kala laabtay Aqoonsiga! – Daawo
Mogadishu (Moment Media Group) – Qilaafka ka jira Villa Soomaaliya ayaa ayaantaan soo kordhaayay, War Saxaafadeed Caawa ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul-wasaaraha ayaa lagu diiday Aqoonsiga Maamulka Cusub ee Khaatumo State.
Ra’iisul-wasaaraha TFG-da C/weli Maxamed Cali ”Gaas” ayaa diiday Aqoonsiga Maamulka Khaatumo State Of Somalia, sida uu ku sheegay War-Saxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul-wasaaraha.
Maxamuud Garaad aa arintaas ka hadlay “Khaatuumo Aqoonsi ugama baahna Cabdiwaalii Gaas iyo Faroole, Khaatumo waxaa dhistay Dadkeeda, waxaana Aqoonsaday Dadkeeda iyo Beelaha Soomaaliyeed oo dareensan Baahida loo qabo Nabad kuwada noolaadka”
Wixii kusoo Kordha Warkaan kala soco antitribalism